Amazon ichatanga inoyerera mimhanzi sevhisi | IPhone nhau
Amazon kuvhura mimhanzi yekushambadzira sevhisi
Kuuya kweApple Music kumusika, kwaive shanduko mumusika wekutenderera mumhanzi. Kubva payakatangwa, makambani akati wandei akaita saRdio kana Line Music akaonekwa akamanikidzwa kudzikisa bofu, nepo mamwe masevhisi akaita saPandora, ari kuona kuti huwandu hwevanyoreri huri kudonha nekuti vari kuenda kuSpotify neApple Music mapuratifomu.
Iye zvino Spotify ndiye mambo wemusika ane vanopfuura mamirioni makumi matatu vanyoreri vanobhadhara, nepo Apple Music iine mamirioni gumi nevatengi. Makambani ese ari maviri ari kuvhura mishandirapamwe ine hukasha kuyedza kutora kufarira kwevashandisi vanofarira iyi nzira nyowani yekupedza mimhanzi.
Sekureva kweReuters iyo hofori yekutengesa kuburikidza neinternet Amazon iri kugadzirira yekushambadzira mimhanzi sevhisi kukwikwidzana neyezvino madzimambo emusika Spotify neApple Music kuburikidza neshumiro yemwedzi yekunyorera. Parizvino vashanduri veAmazon Prime vanokwanisa kuwana katarogu yenziyo dzinove chikamu chebasa iri. Sekureva kweReuters, Amazon ichapa iwo iwo iwo iwo pamwedzi mutengo mune yekunyorera modhi, $ 9,99 pamwedzi kuyedza kukwikwidza mumusika uno. Iyi sevhisi yaizosanganisirwa muAmazon Echo inogadzirwa nekambani, iyo inobvumidza kutamba uye kutonga kwemimhanzi kuburikidza nemirairo yezwi.
Iyo nyowani mimhanzi inopihwa zvakare ichave inokwezva nyowani kutengesa iyo Amazon Echo, kuva mutauri wemba yedu, iyo inotibvumidza kutsvaga kuburikidza neinternet, nzvimbo yekuraira ... zvese kuburikidza nezwi rairo. Amazon inotarisira kusanganisa yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi muAmazon Echo kuyedza kuwedzera kutengesa kweiye anotakurika mubatsiri nekuwedzera akateedzana anoyevedza anoyevedza.
Reuters haisati yataura nezve iyo zuva rekuburitsa yeiyi nyowani yekushambadzira mimhanzi sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Amazon kuvhura mimhanzi yekushambadzira sevhisi
Facebook inomanikidza vashandisi kuisa iyo Moments app kuyananisa mafoto